Iindlela zokunyamekela kunye neziphakamiso zokukhetha ukhilimu.
Khetha ukhilimu wesikhumba seoli, amathiphu kunye neengcinga
I-gloss, ebonakala nje emva kweeyure ezimbalwa emva kokufaka i-makeup, ii-pores ezandisiweyo kunye nokubunjwa kwesikhombiso samathambo, bonisa ukuba unesikhumba somnxeba. Kwaye nangona lolu hlobo luphantsi kakhulu ukuguga, kodwa oku kuya kufuneka uhlawule ngokubakho ubunzima obukulo hlobo. Ukuze uzilahle, kufuneka ukhethe ukhilimu olungileyo.
Iphutha eliphambili labasetyhini kukuba abantu abaninzi banalo uluvo lokuba lolu hlobo luhlukisana ngokubanzi kwi-hydration. Kodwa inyaniso ayikho. Xa iqala ukungabi nomswakama, uzama ukuzalisa iimpahla zayo, ukuvelisa i-sebum ngaphezulu. Namhlanje siza kukuxelela indlela yokukhetha ukulungelelanisa olu hlobo kwaye ulisebenzise.
Zama ukuthenga iimali ngokufakela ukukhanya, kuba isikhumba somnxeba sinexinzelelo kakhulu.
Ngokufanayo, kungcono ukusebenzisa i-lotion ephuculisayo.
Namela ingqalelo kuboniswe kwilebula. Khangela i-salicylic acid kunye ne-benzene. Ezi zinto zimbini azigcini nje ngokunciphisa ama-pores, kodwa zikhuphe ukucaphukisa. Ewe, ukuba ukwakhiwa kunye ne-caffeine, isisombululo semvelo sokunciphisa ama-pores.
Ukuba une-acne, khangela i-cream equkethe i-retinol nesulfure.
Kubalulekile ukuthenga iimali ezahlukeneyo ebusika nasehlotyeni. Kwixesha elibandayo, ukhilimu kufuneka ube ne-denser texture, kwaye ehlobo kuncono ukhethe ukukhanya kwamanzi kunye nee-serum.
Ukuba emva kokusetyenziswa ebusweni kubonakala ngaphezulu izibhunqa, zitshintshe zibe lula.
Iintlobo zeekremu zesikhumba esinamafutha
Ukuhlaziya. Ukusetyenziswa kwemali ngemini ngokugqithisa ukukhanya okuza kuzalisa ulusu ngobumanzi. Kodwa ngobusuku ungathengisa ukhilimu oluninzi, ongayi kuphucula kuphela isikhumba, kodwa uhlambulule.
Ukuguga. Nangona isikhumba se-oily sihamba kamva kamva, akuthethi ukuba ngokubonakala kwezinto zokuqala zokuguga, umntu kufuneka athembele kuphela kwizibonelelo zomzimba. Ukwakhiwa kwekhistile yokuguga kwesikhumba seoli kufuneka kuquke izinto ezikhuselekileyo zelanga eziya kunciphisa umphumo we-ultraviolet.
Ngelishwa, zonke iindlela ezinjalo zininzi, ngoko kungcono ukuthenga iigel okanye iisera.
Ana machiza. Ziquka i-lactic acid. Ezi zonyango zilungele ulusu olunamafutha, njengoko ziqukethe izinto ezingagcwalisi nje isikhumba ngomswakama, kodwa kwakhona zinceda ukucima izibonda ekuthunjeni nasekudakeni.
Izicwangciso zasekhaya. Njengemveliso evela kubavelisi abaziwayo, ama-creams asekhaya aphekiweyo anempembelelo enhle elukhumbeni. Ngokomzekelo, unokufaka isicelo ebusweni bakho ikhukhamba okanye ubuninzi besantato okanye i-yogurt ecacileyo.
Iimbonelelo ezigqwesileyo ezivela kubakhi abaziwayo
Ukuqwalasela iimpendulo zabasetyhini, sidale uluhlu lwemveliso enokuthi iyona ndlela iyasebenza kakhulu kwesikhumba seoli.
Visual Nivea. Ukubunjwa kwezi zimonyo kubandakanya izixhobo ezilawula ngokusisiphumo kunye nokususa i-gloss excessively.
Victy Daytime. Le krimu ayiyiyo imithi kuphela, kodwa ivuselela isikhumba, ngenxa yamanzi ashushu afakwe kwi-composition yayo. Kananjalo ukukwazi ukuthatha amanxeba angaphezulu, okuveliswa yizilwanyana ezinobundlobongela obubhekene ne-matiruet yonke imihla.
BB cream kwi Garnier. Ibeka ngokucacileyo ulusu kunye namanqanaba ombala wayo. Ukongezelela, i-arhente iyanciphisa i-pores ngaphandle kokuyivimba.
I-Siberia iyimpawu yokuthengisa yaseJapane, esele ifumene indumiso yabasetyhini. Iquka ukukhishwa kweSophora yaseJapan, okuthintela ukuvela kweentonga kunye nokucasula.
Ukukhethwa kwiindawo zokuzicoca zikhulu kakhulu, ngoko ungesabi ukutshintsha iindlela zokunyamekela ulusu olunamafutha ngokuxhomekeka kwixesha kunye nezinto ozikhethile kwaye ngokuqinisekileyo ubuso bakho buya kukukholisa ngombala ophilileyo kunye nococekileyo ngaphandle kocwecwe.
Imaski evuyiweyo ebusweni
Yoga ebusweni: isethi yokuzilolonga
Iimfundiso eziza kunceda ukuphumeza amaphupha akho
Ukunyamekelwa kweenwele ezifanelekileyo
Uyi-winemaker: iwayini kwiidiliya ekhaya
I-Canape ehamba ngeentlanzi
Ukuxhaswa kwemali: impembelelo yemozulu kwimpilo yabantu kunye nempilo
Ungayifaka njani indlela yokwenza iholide?
Unokunyamekela njani izinto zokudlala zesini kwaye uzigcine?
Iiperiya zaseTshayina: iimpawu zonyango